सबै भन्दा धेरै यी जिल्लाका युवाहरु रोजगारको लागि विदेशिए ! शिर्ष १० जिल्लाहरु हेर्नुहोस् !
भदौ २१, २०७५ बिगुल
काठमाडौँ- देशमा रोजगारीको समस्या भएको कारण नेपालबाट वैदेशिक रोजगारको लागि वर्षेनी करिब ४ लाखको हाराहारीमा युवाहरू विदेशिने गर्छन्। सरकारले देश भित्रि रोजगारीको अवसर शिर्जना गर्ने भनेता पनि विदेशिने युवाको संख्यामा भने कमि आएको छैन। धेरै जनसङ्ख्या भएका जिल्लाका युवा मात्र नभई कम जनसंख्या भएका जिल्लामा युवाहरु पनि ठुलै संख्यामा विदेशिन वाध्य रहेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ३ लाख २३ हजार ८ सय ७७ जना युवाहरूले म्यानपावर कम्पनीमार्फत् वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिइसकेका छन्। तथ्याँक अनुसार श्रम स्वीकृति र म्यानपावर कम्पनीमार्फत् वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने युवाहरूको सङ्ख्या वार्षिक लगभग ४ लाख ५० हजार हुन आउने गर्छ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४–७५मा सबै भन्दा धेरै धनुषा जिल्लाका युवाहरु विदेशिएका छन् भने सबै भन्दा कम मनाङबाट युवाहरू रहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा सबैभन्दा धेरै धनुषा जिल्लाका युवाहरु वैदेशिक रोजगारको लागि गएको तथ्याङ्क रहेको छ। यस जिल्लाका ३९ हजार ७ सय ७९ जना युवाहरू विदेश पुगेका हुन्।
यस्तै वैदेशिक रोजगारको लागि सबै भन्दा धेरै युवा विदेशिने जिल्लामा झापा दोस्रो जिल्लामा पर्न आउंछ। आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा यहाँका ३० हजार ८६ जना युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिएका छन्। तेस्रो नम्बरमा आउने जिल्ला सिरहाबाट ३० हजार ११ जना युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको लागि गएको तथ्याङ्क रहेको छ।
यसै गरि महोत्तरी (२७,४१७), मोरङ (२५,८९०), नवलपरासी (१९,९४३), सुनसरी (१९,८३०), रूपन्देही (१८,६६२), सर्लाही (१८,६४८), सप्तरी (१८,३२४) जिल्लाहरु क्रमश तेस्रो देखि दसौ नम्बरसम्म पर्छन्। नेपालमा सबै भन्दा धेरै युवा वैदेशिक रोजगारको लागि जाने जिल्लाहरु जनसंख्याको हिसाबबाट पनि धेरै अगाडी रहेका छन्।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४–७५मा वैदेशिक रोजगारको लागि सबै भन्दा कम युवा बाहिरिएका जिल्लाहरुमा मनाङ जिल्ला पर्न आउँछ। यस जिल्लाका ५८ जना मात्रै वैदेशिक रोजगारको लागी गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। डोल्पा (५९), हुम्ला (७२), मुस्ताङ (७३), जुम्ला (३७९) क्रमश दोस्रो देखि पाँचौं जिल्लामा पर्ने गर्छन्।
प्रकाशित : बिहिबार, भदौ २१, २०७५१३:२९
अन्नु बर्माको मृत्यु रहस्यमय बन्दै ! सासू, देवर र अर्का एकजना छिमेकी मिलेर हत्या गरेको आरोप !
हिजो साँझ कञ्चनपुरमा अर्की बालिका बलात्कृत ! स्थानीयवासीको सहयोगमा बलात्कारी पक्राउ !
किशोरीलाई मोटरसाइकलमा राखी जङ्गल लगेर सामुहिक बलात्कार !
प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदित ! को कुन देशको राजदूत ?
मेची पुलमाथिबाट साना सवारी चल्न दिनुपर्ने माग !